जब घरको पिँढीमा बसेर खाना खाइरहेका रविनलाइ चुतुवाले लग्यो ! — SuchanaKendra.Com
जब घरको पिँढीमा बसेर खाना खाइरहेका रविनलाइ चुतुवाले लग्यो !
चितुवाको आ क्रमणबाट तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–३ रातमाटामा सोमबार एक बालकको निधन भएको छ । निधन हुनेमा २२ महिनाका बालक रविन नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।घरको पिँढीमा बसेर खाना खाइरहेको अवस्थामा एक्कासि हराएका बालकको श व घरभन्दा एक किमी टाढा रहेको ढाङढुङ्गे ठूलोपाखा तीनपोखरी सामुदायिक वनमा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहँुका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार शरीरको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भाग चितुवाले खा एको अवस्थामा बालकको श व भेटिएको थियो ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पनि चितुवाले बालकलाई आ क्रमण गरेपछि यहाँका स्थानीयवासी त्र सित भएका छन् । यस अगाडि तनहुँको भानु नगरपालिकाका विभिन्न वडामा चितुवाबाट डेढ वर्षको अवधिमा छ बालबालिकाको निधन भएको थियो ।
यसैबीच डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले सोमबार नै पीडित परिवारलाई किरिया खर्चवापत रु ५० हजार राहत उपलब्ध गराएको छ । सहायक वन अधिकृत बाबुराम उप्रेतीले मृ तक बालकको घरमा पुगेर बुबा राजु नेपालीलाई उक्त रकम प्रदान गरेका छन् । पछिल्लो केही वर्षयता चितुवाको कारण बालबालिकाको निधन हुन थालेकाले साँझ बिहानको समयमा सतकर्ता अपनाउन उप्रेतीले आग्रह गरे ।